Qof shacab ah oo isku toogtay Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qof shacab ah oo isku toogtay Muqdisho
Qof shacab ah oo isku toogtay Muqdisho
Wararka ka imaanaya degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in Wiil dhalinyaro ah oo heystay Bastoolad uu isku toogtay gudaha degmadaasi, sida ay inoo xaqiijiyeen masuuliyiinta degmada Waaberi.
Dhacdadan oo si gaar ah uga dhacday Waaxda October Laanta Dhagaxtuur ee degmada Waaberi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ninkan dhalinyarada ah oo Da’diisa ay aheyd 25 sano uu keligiisa ku ciyaarayay Bastoolad uu lahaa Askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka, midaasina ay sababtay in Hal xabad ay ku fakatay, taasi oo kaga dhacday Madaxa.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay Idaacadda Radio baidoa u sheegeen in arrintan ay dhacday shalay gelinkii dambe abaare 05:30 daqiiqo galabnimo, ninkaasina goobta looga qaaday dhaawac ahaan, balse xalay uu ku geeriyooday gudaha Isbitaalka Madiina, maadaama xabada ay kaga dhacday meel halis ah.
Allaha u naxariistee marxuumka dhintay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Maxamuud Cabdi, halka askariga Bastoolada iska leh lagu magacaabo Axmed Faarax Aadan, kaasi oo hada su’aalo laga weydiinayo sababta keentay in Bastoolada ay gacantiisa ka baxsato.
Dadka ku nool degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa aad u hadal haya arrintan, waxaana labadii qof ee meel taaganba ay isku soo hadal qaadayaan dhacadan.
Maalmahan dambe waxaa soo baanayay dhacdopoyinka la xiriira inay is dilaan dadka ehelka ah ama inuu qof is dilo, waxaana ugu dambeysay todobaadki tagay oo Wiil walaalkiisa ku dilay xaafada Kaawo Godey ee degmada Dharkeynley, arrimo la xiriira dhaxaltooyo.